Ngingazitholaphi Kwesokunxele Impahla Izindawo EFrance? | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Ngingazitholaphi Kwesokunxele Impahla Izindawo EFrance?
Ngingazitholaphi Kwesokunxele Impahla Izindawo EFrance?
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 31/07/2020)
France iyikhaya izinkulungwane ezikhangayo. Kusukela yisakhiwo sodumo-Eiffel Tower eParis kuya amabhishi pebbled Nice, ezweni izinto engapheli ukwenza. Kodwa kuthiwani uma olivakashelayo kwi LAYOVER_DURATION, noma usuvele ngahlola kwehhotela lakho futhi isitimela sakho akabashiyi amahora? Kunokuba ebamba imithwalo yakho kulo emadolobheni ahlukene, uzithole kwesokunxele umthwalo indawo emhlabeni France ukushiya imithwalo yakho futhi ujabulele yousuku ur umthwalo-free.
Njengoba sishilo, izwe ligcwele izindawo ukushiya imithwalo yakho, Nokho wokuqonda ukuthi iyiphi engcono kuwe kuncike isimo sakho.
Isithuthi somzila Is The nokunobungane Way Izikhangibavakashi. This sihloko eyabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Londoloza Isitimela, I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
Kwesokunxele Impahla Izindawo Ngo Izikhumulo zezindiza
Uma uvakashele idolobha kwi LAYOVER_DURATION, uke banokuningi ongakhetha ukugcina izikhwama zakho. Paris has zezindiza ezimbili eziyinhloko, Charles de Gaulle (CDG) futhi Paris Orly (ORY), futhi kokubili sipho isitoreji umthwalo ngaphakathi ukugcina. izindiza Iningi main zishayeka Charles de Gaulle, ikakhulukazi izindiza enqamula, ngenkathi ongaphakeme isabelomali izindiza bathambekele zishayeka Paris Orly. Kungakhathaliseki sezindiza yakho, ungakwazi ukuthatha izikhwama zakho ngemva kwendiza yakho bese uphonsa zibayise ngokuphepha ngaphambi ulibangise edolobheni.
Ngezinye yomfowabo kaCharles de Gaulle, ungathola ikhabethe eduze esiteshini sesitimela, okwenza kube ikakhulukazi. Isitoreji itholakala kusukela 06:00 ukuze 21:30, ngakho qiniseka ukuthi ubuye ngaphambi Kuvalwa indawo.
Paris Orly esifanayo, nge kwesokunxele ongakhetha umthwalo luyatholakala eduzane esiteshini sesitimela. Amanani iyashiyana ezicini eziningana, kuhlanganise izingcezu kwesokunxele kanye nosayizi, Nokho, kunengqondo jikelele. Amahora ziyefana CDG, kusukela 06:00 ukuze 21:30, ngakho ngaphandle uma engasafuni ukuphuma khona umthwalo wakho ngobusuku obubodwa ukuqinisekisa ukuthi ufike ngesikhathi.
Okunye zezindiza ngaphakathi France isebenze ngendlela efanayo, nge ongakhetha wemithwalo kuyatholakala at zezindiza eziningi, kufaka Nice, Lyon, futhi Marseille. Hlola sezindiza wangakini ongakhetha isitoreji namanani.
Kwesokunxele Impahla Izindawo Ngezinye zemininingwane Zokusebenzela
Zokusebenzela In Paris
Uma esikhundleni transiting ngokusebenzisa esiteshini sesitimela, wena ethulwa plethora ongakhetha. Phakathi Paris, Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Gare Montparnasse, futhi Gare de Marne la Vallee Chessy zonke sipho kwesokunxele ongakhetha umthwalo, nezinkampani eziningi ezahlukene ukuncintisana ukunikela amasevisi abo.
Amanani la masevisi ziyahlukahluka, nge Imali flat-rate ngowokuqala 24 amahora, nesikhathi isitoreji esiphezulu 72 amahora. Amanani zingokulandelayo: small locker €5.50; eydijithali naphakathi € 7.50; eydijithali enkulu € 9,50. ngamunye ezengeziwe 24 inkathi yamahora angu kuyinto € 5.
Amahora nezindawo futhi ziyahlukahluka kuye esiteshini:
Ukuze Ukufika ezivela eMpumalanga: Gare de l'Est level -1 Hall Central opposite toilets from 06:00 ukuze 23:45 nsuku zonke
Ukuze Ukufika kwabakwa-South: Gare de Lyon Hall 3, ukuphuma ngoba rue de Bercy 06:15 ukuze 22:00 nsuku zonke
Isendaweni ibhange kwesokunxele: Gare Montparnasse omunye level 07:00 ukuze 23:00 nsuku zonke
Umhlangano omkhulu kunayo yonke e-Paris: Gare du Nord level -1, eduze Ukuqashwa kwemoto, ku ophumayo itekisi esuka 06:15 ukuze 23:15 nsuku zonke
Labo kusihloko ukuze Disneyland: Isiteshi Marne la Vallee Chessy: level 1 - 07:00 ukuze 23:00 nsuku zonke
Zokusebenzela Phakathi France
Phakathi nalo lonke izwe, Iziteshi eziningi isitimela ukunikela umthwalo kwesokunxele bese indlela elula ukugcina izimpahla zakho. Lokhu kuhle ikakhulukazi abavakashi kwi Eurail uhambo, abakhetha ukuba ngokuphazima kweso ugibele isitimela kunokuba amahhotela. Hlola uhlu lwendawo isiteshi sakho isitimela ukuthola ukuthi yini ongakhetha imithwalo abasinikezayo. Njengoba izwe kuyinto inketho kakhulu ngoba ujantshi travel, angamakhulukhulu imizila yokuxhuma zonke emadolobheni amakhulu nasemadolobheni, you can find left luggage locations all over France.
Amanani ngokuvamile banengqondo amahora umthwalo ziyahlukahluka kusuka 24 ukufinyelela ihora kuya ukuvalwa ekuseni. Iziteshi zezitimela futhi alethe inketho kakhulu zabahamba, njengoba ukuvakasha nge isitimela kudinga imikhawulo Imbalwa kakhulu izindiza. Ungakwazi zifika sekudlule imizuzu nje ngaphambi isitimela isuka (esikhundleni amahora, uthanda esikhumulweni sezindiza), futhi ubambe izikhwama zakho ngaphambi igxuma ku isitimela sakho, ukuvumela ukukhulisa isikhathi sakho emzini.
Kwesokunxele Impahla Izindawo Around The City
Uma kakade uvakashele idolobha izinsuku ezimbalwa futhi nje manje usuhamba, kungenzeka ukuthi inhlanhla. amahhotela amaningi aseYurophu ukunikela ikhulule isikhala sokulondoloza sekhompyutha umthwalo uma isivakashi, futhi ungabuyela nganoma isiphi isikhathi ukubuyisa izikhwama zakho. Kunjalo ezinye izinketho Homestay, ezifana Airbnb. Buza umninikhaya wakho uma bethanda ukubamba izikhwama yakho ngenkathi ukuhlola idolobha.
kungenjalo, amadolobha amaningi enikeza ongakhetha umthwalo kwesokunxele ezungeze idolobha, eduze ikakhulukazi enkulu izivakashi. Kukhona ezinye izinsizakalo ezimele, kodwa futhi izinkampani ezinkulu eziningana etholakalayo emazweni amaningi France.
Stasher: Stasher iyisevisi umthwalo exhumanisa abahambi nge izitolo kanye namahhotela anikeza izinkonzo isitoreji. Itholakala emadolobheni kakhulu French ezinkulu ivumela yokubhuka inthanethi, okwenza kube lula kakhulu. iwebhusayithi layo nalo obusebenzayo kakhulu futhi kubonisa amahora indawo, amanani, kanye nokubuyekezwa of indawo ngayinye ukuze abavakashi ongamethemba imithwalo yabo izogcinwa ngokuphepha.
ः Olibg: Holibag enye inkampani enkulu zonke etholakalayo phezu France. Ngokufana Stasher, isayithi uxhuma amakhasimende amabhizinisi ezifana zokudla, amahhotela, nezitolo ukuthi isitoreji sipho umthwalo. Ngamakhulu izinto ezahlukene ongazikhetha, wena cishe okuqinisekisiwe ukuze uthole indawo ukulahla izikhwama zakho, ngakho ungakwazi ukujabulela usuku lwakho.
Nannybag: Uma bahlala e-Paris, ukubheja Okungcono Nannybag. Isevisi ngobukhulu isitoreji emzini, Nanny isikhwama izipesheli emakhulwini ezindawo kanye 24 ukufinyelela yihora bobusuku extra ngasekupheleni. Amanani flat € 6 isikhwama ngasinye ngosuku lokuqala futhi € 4 kwalokho. Omunye izinto ezihamba phambili mayelana Nannybag ukuthi iqinisekisa ukuphepha esikhwameni sakho nge umshwalense ayo, okuyinto izindlela ungaba nokuthula Imininingwane kwengqondo.
Kunezizathu eziningi ubungeke ufuna ukushiya esikhwameni sakho ugcinwa ngokuphepha, ngabe uvakashele idolobha kwi uhambo day noma okwenza isikhathi sakho ngaphambi isitimela sasebusuku. Izikhumulo zezindiza kukhona inketho esihle kakhulu layovers, ngenkathi zezitimela ukunikela ezinye izinqumo ezingcono kakhulu kulo lonke izwe. kungenjalo, izinsizakalo zangasese yokuxhuma izihambi amabhizinisi benza bephonsa izikhwama zakho elula futhi kulula. Kunoma yikuphi, kufanele uqinisekise ukuthi ukwenza umsebenzi wakho wesikole izinketho etholakalayo, amanani, namahora isitoreji ukuze ukwazi ukuthola best umthwalo kwesokunxele izindawo eFrance ngawe.
Found athikili yethu “Ngingazitholaphi Kwesokunxele Impahla Izindawo EFrance?” eziwusizo? Book nge Londoloza Isitimela wena athenge amathikithi esitimela ngemali French bese uqale uhambo lwakho!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Ngingazitholaphi Kwesokunxele Impahla Izindawo EFrance?” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cafes-europe%2F ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / fr ukuba / noma / es kanye ngezilimi ezingaphezu.
izikhwama leftluggage storebags amasudi Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelfrance travelfree travelparis
Indlela Okuhambayo Ukuze Norway Ingabe Okuhlukile Izikhangibavakashi Experience
Qeqesha Ukuhambela ENorway, Izikhangibavakashi Europe
Isizathu Sokuba Be Okuhambayo EYurophu Entwasahlobo
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuhamba Spain, Izikhangibavakashi Europe